မက်ဆီ (or) ရိုနာဒို Debate မှာ အပြန်အလှန် ငြင်းခုန်ခဲ့ကြပြန်တဲ့ ကာရေဂါ နဲ့ ဂယ်ရီနဗီးလ် - Sports myanamr
မက်ဆီ (or) ရိုနာဒို Debate မှာ အပြန်အလှန် ငြင်းခုန်ခဲ့ကြပြန်တဲ့ ကာရေဂါ နဲ့ ဂယ်ရီနဗီးလ်
မနေ့ညက တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Monday Night Football အစီအစဉ်မှာ လီဗာပူး ကစားသမားဟောင်း ကာရေဂါ နဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်း ဂယ်ရီ နဗီးလ် တို့ဟာ ဘောလုံးလောက ရဲ့ ပြယုဂ် နှစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မက်ဆီ နဲ့ ရိုနာဒို တို့ အကြား ဘယ်သူက ပိုကောင်းလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်း အပေါ် အပြန်အလှန် ငြင်းခုန်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။
ဒီတစ်ကြိမ် မှာတော့ အဆိုပါ ကစားသမား နှစ်ယောက် အကြား ဘယ်သူက လက်ရှိ အသင်းကို ပိုကောင်းအောင် စွမ်းဆောင်ပြနိုင်လိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ အမြင်ကနေ ဆွေးနွေးကြတာပါ။
ယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်းကြီး ဂယ်ရီ နဗီး ကတော့ သူ့ရဲ့ အမြင်ကို အခုလို စတင် ချပြလာပါတယ်။
“ ဘယ် ကစားသမား က ပိုကောင်းတယ် ဆိုတာ ပြောရမယ် ဆိုရင် …. လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်တုန်းက ပရိးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ခန့်မှန်းချက် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော် သုံးသပ်ခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်က ယူနိုက်တက် ကို ချန်ပီယံလောင်း စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်း မရှိပေမယ့် ၊ ရိုနာဒို ရောက်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ချန်ပီယံ ဖြစ်နိုင်ချေက ပိုပြီးတော့ များလာခဲ့ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အတိုင်းပြောရရင်တော့ သူဟာ ယူနိုက်တက် ကို ဒီရာသီမှာ အမှတ်ပေးဖလား ရအောင် စွမ်းဆောင်ပြလိမ့်မယ်လို့တော့ မျှော်လင့်မထားပါဘူး။
ပုံမှန် အားဖြင့်တော့ မက်ဆီ နဲ့ ရိုနာဒို အကြား ဘယ်သူက ပိုကောင်းလဲ ဆိုတဲ့ အငြင်းအခုန်တွေကြားမှာ ကြားမညှပ်ဖို့ ကျနော် က အမြဲတမ်း ရှောင်ပါတယ်။ လိုလဲ မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ နှစ်ယောက် စလုံးက ပြောစရာ မလိုလောက်အောင် ကောင်းမွန်ပြီးသားမို့ ၊ သူတို့ ကို ထိုင်ကြည့်ခွင့်ရနေတာကိုက ကျေနပ်စရာပဲလေ။
ဒါပေမယ့် တယောက်ယောက်ကများ ကျနော့်ကို ဒီလိုမေးခွန်းမျိုး မေးလာခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ၊ ဒီလိုလေး ဖြေကြည့်ချင်ပါတယ်။
“ ပွဲပြီးဖို့ 10 မီးနစ်ပဲ လိုတော့တဲ့ အချိန် ၊ ကိုယ့် အသင်း အနိုင်ရဖို့ အတွက် လူစားလဲခွင့် တယောက်ပဲ ရှိတော့တာ ဆိုရင် ဘယ်ကစားသမားကို ထည့်သွင်း ကစားချင်လဲ လို့ မေးလာခဲ့ရင် ရိုနာဒို လို့ပဲ ပြောမိမှာပါ”
ဘာလို့လဲ ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ ဂိုးသွင်းထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို ကြည့်လိုက်ဦးလေ။ သူဟာ ညာခြေနဲ့သာ မက ဘယ်ခြေနဲ့လဲ ဂိုးတွေ အများကြီး သွင်းပြထားနိုင်တယ်။ ပြီးရင် အဝေးကန်ချက်တွေ နဲ့ ဂိုးသွင်းနိုင်တယ် ၊ ပင်နယ်တီကန်တာလဲ ကောင်းတာပဲ။
အဲဒီ အချိန် ပြိုင်ဘက်က 18 ကိုက်ထဲမှာ ပိတ်ထားမယ် ဆိုရင်တောင် ၊ သူက ခေါင်းတိုက်ချက်တွေ နဲ့ ဂိုးသွင်းပြနိုင်ပါသေးတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဖရီးကစ် ကနေလဲ ဂိုးတွေ မျှော်လင့်လို့ရနေပြန်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ကျနော် ကြည့်ဖူးခဲ့သမျှ ကစားသမားတွေ ထဲက ပြောရရင် သူဟာ ဘောလုံးသမိုင်းကြောင်း တလျှောက် ပွဲကို အပြောင်းအလဲ လုပ်ပြနိုင်ဆုံး ကစားသမား ဖြစ်သလို ၊ အခမ်းနားဆုံး ကစားသမားလို့တောင် ယုံကြည်ထားပါတယ်။
ကာရေဂါ က ကျနော့် ကို ဘက်ကန်တော့မှာပါ။ ခေါင်းတွေ ရမ်းခါပြနေပါပြီ။
အခုလို ပြောတာက ကိုယ့်အစွဲ တခုတည်းကို ဆွဲကိုင်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ အချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီးမှ ပြောဆိုတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲတပွဲကို အနိုင်ရဖို့ အတွက် ဘယ်သူက ဖြစ်နိုင်ချေ အများဆုံးဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပြမလဲ ၊ ဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံကို ဘယ်သူက ပိုပြီး အသုံးချပြနိုင်မလဲ ဆိုတာကို ချပြတာပါ” လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်။
သို့သော် ကာရေဂါ ကတော့ သူ့ရဲ့ အမြင်ကို လုံး၀ လက်မခံပဲ အခုလို ပြန်လည် ချေပခဲ့ပါတယ်။
“ ကျနော် က မက်ဆီဖန် လဲ မဟုတ်သလို ရိုနာဒို ဖန် လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီတော့ ရိုနာဒို ဟာ ဘောလုံးသမိုင်းထဲ အခမ်းနားဆုံး ဘောလုံးသမားလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
နဗီး ပြောနေတဲ့ အချက်တွေက သွင်းဂိုးတွေ မတူတဲ့ အချက်တွေ တွေကို အဓိက ထားနေတာပါ။ ဂိုးသွင်းတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုလို သွင်းသွင်း ပြသနာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ အဓိက က ပိုက်ထဲကို ဘောလုံး ရောက်သွားဖို့ပဲလေ။
မက်ဆီ ရဲ့ သွင်းဂိုး မှတ်တမ်းက ရိုနာဒိုထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ မက်ဆီ ဟာ Playmaker တယောက် ဖြစ်သလို ၊ တစ်ပွဲလုံးကို ဟန်ချက်ညီအောင်လဲ မောင်းပြနိုင်တဲ့သူပါ။
ရိုနာဒို က ဒါမျိုး မလုပ်ပြနိုင်ပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် ဒီလို ပြောတာကလဲ ဝေဖန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
နဗီး က ဘယ်သူ့ကို အရံထိုင်ခုံကနေ လူစားလဲချင်တယ် ဆိုတာပဲ ပြောနေတာပါ။ ဘောလုံးသမိုင်းကြောင်း တလျှောက် အခမ်းနားဆုံး ကစားသမားဆိုတာကို ပြောနေတာ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ တိတိကျကျ ပြောရရင် မက်ဆီ ရဲ့ လူစားဝင်လာပြီးမှ သွင်းတဲ့ ဂိုးအရေအတွက်ဟာ ရိုနာဒို ထက်တောင်2ဆ နီးပါး ပိုများသေးပါတယ်။
ရိုနာဒို ဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘောလုံးသမား တယောက် ဆိုတာတော့ လုံး၀ လက်ခံပါတယ်။ သူဟာ နေရာပေါင်းစုံကနေ ဂိုးတွေ ရအောင် သွင်းပြနိုင်တဲ့သူပါ။ မက်ဆီ ဆိုရင် ညာနေ နဲ့ မသွင်းနိုင်သလို ၊ ခေါင်းတိုက်ဂိုးတွေလဲ အများကြီး မသွင်းဖူးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် မက်ဆီ ဟာ ကြည့်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေ မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ မှော်ဆန်တဲ့ အခိုက်အတန့်မျိုးတွေတောင် ဖန်တီးပြနိုင်ပါတယ်။ ပြောရရင် ရိုနာဒို လုပ်တာမျိုး အခြား ကစားသမားတွေလဲ လုပ်ပြနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းတိုက်ဂိုး သွင်းတာလား ၊ အဝေးကန်ချက်လား ၊ ဖရီးကစ်လား အကုန်လုပ်ပြနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မက်ဆီ ဟာ ကျနော်တို့ တခါမှ မမြင်ဖူးတာတွေကို လုပ်ပြနိုင်တဲ့ သူပါ။ ဖန်တီးမှုလား ၊ ပွဲကို မောင်းနှင်ပြတာလား ၊ အများကြီး လုပ်ပြထားပြီးပါပြီ။
အဲဒီတော့ နှစ်ယောက် စလုံးဟာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ကစားသမားတွေ ဖြစ်တာ မှန်တယ် ၊ သွင်းဂိုးတွေ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြတယ် ဆိုတာတော့ ကိုယ့် ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်တာမျိုး ဖြစ်နေလို့ ကျနော်က ထောက်ပြတာပါ” လို့ ပြန်လည် ချေပသွားခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကရော နဗီးလ် ဘက်ကလား ၊ ကာရေဂါ ဘက်ကလားဗျာ……..
Previous Article ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အနေအထားများ – အုပ်စု A ၊ အုပ်စု B
Next Article ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အနေအထားများ – အုပ်စု C ၊ အုပ်စု D ၊ အုပ်စု E